Ny famerana ny dia maharitra dia mitaky olana amin'ny toeram-pialan-tsasatra eropeana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Ny famerana ny dia maharitra dia mitaky olana amin'ny toeram-pialan-tsasatra eropeana
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Sports • Tourism • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Febroary 8, 2021
Ny fifamoivoizana rehetra any amin'ny toeram-pialan-tsasatra dia azo inoana fa avy amin'ny tsenan'ny loharanom-baovao ao an-toerana, izay ambany kokoa ny fandaniana antonony isaky ny mpizahatany, ka miteraka fihenan'ny vola bebe kokoa
Ny resort ski eropeana dia miankina amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina ihany mba ho tafavoaka velona
Ny antsasaky ny sekoly federaly dia loharanom-bola lehibe satria mitady hitsoaka ny fianakaviana raha mbola tsy mianatra ny ankizy
Ny orinasa kely sy miasa an-trano dia mety ho voa mafy indrindra
Ny famerana ny dia maharitra dia mety ho fantsika farany amin'ny vatam-paty ho an'ireo mpandraharaha ao amin'ny resort ski eropeana sasany satria miankina amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina ihany izy ireo. Na dia mety tsy ho lohalaharana aza ny fandrakofana oram-panala amin'ny faran'ny vanim-potoana amin'ny tapaky ny volana febrily, ny antsasaky ny sekoly federaly dia loharanom-bola lehibe satria mitady hitsoaka ny fianakaviana raha mbola tsy mianatra ny ankizy.
Ireo mpandraharaha fitsangatsanganana an-toerana dia hijaly indrindra. Raha tsy misy na mihena ny isan'ny mpandeha ao amin'ilay toeram-pialofana dia ho voafetra ihany ny fidiram-bola. Izay fifamoivoizana any amin'ireny toeram-pialofana ski ireny dia mety ho avy amin'ny tsenan'ny loharanom-bola anatiny, izay ambany kokoa ny fandaniana antonony isaky ny mpizahatany, ka miteraka fihemorana ara-bola. Ny orinasa madinidinika sy tantanan'ny fianakaviana dia mety ho voa mafy indrindra, satria orinasa tsy miankina izy ireo, izay midika fa tsy afaka manonitra ireo fatiantoka ireo any an-kafa izy ireo.
Etsy an-danin'izany ny kaompaniam-pitaterana vola lafo vidy, mety tsy hisy fiantraikany amin'izany noho ny loharanom-bola hafa manerantany. Ny zotram-piaramanidina izay manompo ireo toerana itadiavana ski ireo dia mazàna mampiasa fomba fampidinana vidiny mafonja mba hampiakarana ny saran-dalan'ny tapakila mifanaraka amin'izany fitomboan'ny tinady izany, izay adika ho sidina mahasoa miaraka amina entana be. Na dia hiteraka ny mifanohitra amin'izany aza ny tsy fahampian'ny fangatahana, ny orinasam-pitaterana vola lafo vidy dia manana fahaizana mampitombo ny tombony amin'ny alàlan'ny fomba hafa, toy ny sidina fangatahana, satria mitady hamandrihana fialantsasatra ho an'ny fahavaratra hatrany ny mpandeha.
Ireo firenena eropeana izay manana toeram-pizahan-tany hafa ary tsy miankina tanteraka amin'ireo toeram-pialantsasatra ireo mba hivelomana amin'ny toekarena fizahan-tany dia tokony hitrandraka ireo karazana fialantsasatra omena mandritra ny taona. France, izay firenena be mpitsidika indrindra eto an-tany, dia mety hitarika ny ampahatelony Covid-19 fanidiana, fa manolotra fisarihana tsy manam-petra manalavitra ny tehezan-tendrombohitra izay azo tsidihina rehefa miverina ny dia.
Lotte Hotels & Resorts anarana anarana Tale jeneralin'ny Amerika vaovao
Inona ny MVP sy ny fomba fampiharana azy amin'ny famolavolana fitaovana
Nanjary mora kokoa ny fizahan-tany ho any Guatemala sy Cancun
IZA: Maty i COVID-19 i Afrika Andrefana ...
Miarahaba ireo mpitsangatsangana amerikana niverina ny Repoblika Tseky
COVID-19 Namono Tena tsy navela Famonoana an'i Neny sy ny Zanany
Air Canada dia manangana serivisy vaovao tsy an-kiato eo anelanelan'ny ...
Ahoana no ialan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Widerøe COVID-19 goavana ...
WestJet dia manohana ny fanaovana vaksiny tsy maintsy atao amin'ny Airline ...
Fitsangatsanganana sy fizahantany any Albania: Tatitry ny fiatraikany COVID
Fanamby lehibe momba ny fizahantany eropeana nanasongadina ny ...
Fitsarana iray hafa Fandresena any Seychelles avy amin'i Alain St. Ange
Mpizahatany rosiana 137 no nisafo karana tany Cuba taorian'ny fitsapana ...
2021 Top 10 Hotspot Global Foodie erantany naseho
Fiaretana sy fitantanana krizy manerantany ...
Saudia, Emirates, Etihad Airways sidina mankany Jamaika ...
Fanamafisana ny dia mahaliana amin'ny toetrandro mankany aotra